Keto Guru မြန်မာ, စျေးနှုန်း, အသံုးျပဳနည္း, တကယ့္ရလဒ္အစစ္ – သင္၏တစ္ကိုယ္လုံးကိုက်န္းမာေစျခင္း
By Step Asha | July 6, 2020
Keto Guru အသံုးျပဳနည္း, တကယ့္ရလဒ္အစစ္, အကျိုးကျေးဇူးများ, အဘယ်မှာဝယ်ပါရန်, စျေးနှုန်
Keto Guru တကယ့္ရလဒ္အစစ္, အဘယ်မှာဝယ်ပါရန်, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်, ဖိုရမ်, မြန်မာ
Keto Guru ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ပံု, အကျိုးကျေးဇူးများ, ကိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှု, မြန်မာ
Keto Guru ဆေးတိုက် စြေး, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်, တကယ့္ရလဒ္အစစ္, ကိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှု
အစားအစာပေါများမှုတွင်ကာဗွန်နိမ့် ( ကက်တိုဒိုက် ဟုလည်းခေါ်သည် ) သည် အထူးရေပန်းစားသည်။ ၎င်း၏ပိုင်ထိုက်သောဘိုဟိုက်ဒရိတ်အတွက်အများဆုံးကျဆင်းခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးအစားအသောက်များတွင်တစ်ပြည်နယ်သို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမိတ်ဆက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျအလောင်းတွေများနှင့်အဆီမီးလောင်ရာ ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်တစ်ခုတိုး -။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းညှိရန်အတွက်ဆေးအသစ်တစ်ခု၏လုပျငနျး – Keto Guru တူညီသောနိယာမအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤဆောင်းပါးမှအသုံးပြုသူများနှင့်အထူးကုများထံမှ တကယ့္ရလဒ္အစစ္ Keto Guru အသံုးျပဳနည္း, ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ပံု, အဘယ်မှာဝယ်ပါရန် နှင့်ဤကိရိယာနှင့်ပတ်သက်သော ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက် အားလုံးကိုလေ့လာပါလိမ့်မည်။
ဘာ Keto Guru?
သည်သဘာဝတွင်မွေးရာပါအကာအကွယ်ပေးသည့်ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတစ် ဦး သည်တာရှည်အစားအစာမရှိသောအခါအတွင်း၌ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုရှင်သန်နိုင်စွမ်းကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေသည်။ ဤအခြေအနေတွင်သူသည်အစားအစာနှင့်အတူပါရှိသည့်အဆီများနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များမှမဟုတ်ဘဲသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်ခြင်းမှစွမ်းအင်ရရှိသည်။ ဒီတုံ့ပြန်မှုကြောင့်, အရေပြားအောက်ဆုံးအလွှာကိုလျှော့ချနှင့် ပြည်တွင်းရေးအဆီရေနစ်သေဆုံး။
Keto Guru – ထိုစတင်ခြင်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်ကြောင်း အစားအသောက်များတွင်ဆေးပြား အဆင့်။ အကယ်၍ ပုံမှန်အစားအစာဖြင့်လူတစ် ဦး သည် ရက်မတိုင်မှီတွင်ထိုအဆင့်သို့မရောက်ရှိပါက၎င်းသည်ဆေးကိုသောက်သောအခါမိနစ် ၄၀ အကြာတွင် အလောင်းများစတင်ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်စားသုံးမှု၏ပထမနေ့မှစပြီးအတွင်းအဆီလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ဂလူးကို့စ်နှင့်ကိုလက်စထရောပမာဏလျော့နည်းသွားခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာခြင်း၊
အစားအသောက်ဆေးများ ဆေးတိုက် စြေး Keto Guru အဝလွန်ခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်အာရုံတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဤကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အစာငတ်မွတ်သောအစားအစာတွင်ထိုင်ရန်၊ ပုံမှန်အစားအစာမှအချို့သောအစားအစာများကိုဖယ်ထုတ်ရန်၊ ထို့အပြင်ဤအစားအသောက်ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်အရေးကြီးသောအားသာချက်များရှိသည်၊
အဆိုပါဖွဲ့စည်းမှုဆိုဆံ့ပါဘူး (အစိတ်အပိုင်းများ ၏) တိရိစ္ဆာန်ဇာစ်မြစ်, ဓာတုသည်။
သည် အန္တရာယ်ရှိ သည် သာမက အကျိုးရှိ စေကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဆီးချိုရောဂါကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်တိုက်ဖျက်ခြင်း၊ သိမြင်နိုင်သောစွမ်းရည်များတိုးတက်ခြင်း၊ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကုသခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်နှင့်ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာပိုလျှံသောကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း၊ ဆဲလ်များကိုခွဲထုတ်ခြင်း၊
Keto Guru သာမန်ကာဗွန်နိမ့်ကျသောအစားအစာများနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်၎င်းတို့အားဆိုးကျိုးများဖြစ်စေသည်မဟုတ်ပါ။ ခေါင်းမူးခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ လျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်အိပ်စက်ခြင်းပြeများကြုံတွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အတွင်းပိုင်းကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်စနစ်များ၏လည်ပတ်မှုကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သောသဘာဝဖြစ်စဉ်များကိုစတင်သည်သဘာဝနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်အများဆုံးသောအစားအစာများကို ဟုခေါ်သည်။ ၎င်း၏ဒုတိယအမည်မှာကာဗွန်ဓာတ်နည်းသောအစားအစာဖြစ်သည်။ ဤအစားအစာဖြင့်လူတစ် ဦး သည်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်စားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးပရိုတင်း၊ သည်ရလဒ်ကောင်းများရရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်မှာ ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်မှထွက်ခွာပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှား စေသည်။ ၎င်းသည်အရေပြားအောက်ဆုံးအဆီအားစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေခြင်းအားဖြင့်ကံဆိုးသောပမာဏကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ သို့သော်ကြီးမားသောတစ်ခုဖြစ်သည်! ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအမျှင်ဓာတ် လျော့နည်း ခြင်းသည်လူ့ကျန်းမာရေးကိုမပျက်စီးစေနိုင်ပါ။
ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်, အခြေအနေသို့ ၀ င် ရောက်ခြင်းသည် တတ်နိုင်ပြီးကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အတွက်ပျော်ဝင်နေသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်များမစွန့်ဘဲ Keto Guru ဖြစ်သည်။
Keto Guru – ဤထုတ်ကုန်သည် တက်ဘလက်ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဖြစ်စဉ်ကိုဖွင့်ရန်ပြုလုပ်နိုင် သော်လည်း၎င်းသည် အလွန်အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုဆိုလို သည့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များကိုငြင်းပယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်အ ၀ လွန်သည့်တစ်သျှူးများကြောင့်သာဖြစ်ပြီးကြွက်သားများကသူတို့၏လေသံကိုလျော့နည်းစေပြီးမလျှော့ချပါ။
ထုတ်ကုန်သည်၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းအုပ်စုနှစ်စုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပညာရှင်များ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိပထမအုပ်စုတွင်ပါဝင်သူများသည် ကိုလိုက်နာ ကြသည်။ ဘာသာရပ်များ၏ဒုတိယအုပ်စုသည်ပုံမှန် မှာစားရကြ၏နှင့်ရှုပ်ထွေးသောကိုလောင် Keto Guru။ ရလဒ်များသည်သိပ္ပံပညာရှင်များကိုယ်တိုင်ပင်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိခဲ့သည်။ တစ်လကြာလျှင်ပထမအုပ်စုတွင်ပါဝင်သူများသည်သူတို့၏ကိုယ်အလေးချိန်ကို ၆ ကီလိုဂရမ် သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို၍ လျှော့ချလိုက်သည်။ ဒုတိယအုပ်စုသည် ၁၀ ကီလိုဂရမ်ထက်ပိုသည်။ ထိုသို့ဖော်ပြရကျိုးနပ်သည် တုပ်ကွေးရောဂါ သရုပ် (မူးဝြေခင်း,, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အပူချိန်မြင့်တက်လျော့နည်းသွားအားနည်းခြင်း) ၏ပထမဦးဆုံးအုပ်စုတွင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြသည် လေ့လာ လူတွေ။ ဒုတိယအုပ်စုသည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားကြောင်းမှတ်ချက်ပြုသည်။
အဆိုပါရှုပ်ထွေးသောကိုအသုံးပြုသည့်အခါ Keto Guru မိနစ် ၄၀ မှ ၅၀ အကြာတွင်အက်တမ်တစ်သျှူးများ၏သဘာဝနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုဖယ်ရှားပေးရန် အလောင်းများဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထို့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်သည်မြင့်မားသောကိုလက်စထရောကိုလျော့နည်းစေသည်၊ သွေးထဲတွင်ဂလူးကို့စ်ပမာဏကိုလျော့ချပေးသည်၊ အဆီဆဲလ်အသစ်များကိုမဖန်တီးနိုင်တော့ပါ၊
၎င်းတို့သည်အသက် ၁၈ နှစ်ကျော်။ အ ၀ လွန်ခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တက်လိုသောအားအင်ပြည့်ဝ။ အားနည်းသောလိင်ဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကဒီထူးခြားတဲ့ကိရိယာ ကို အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်
လေထုမရှိခြင်းအပါအဝင်ရင်ဘတ်၌ မသက်မသာ အာရုံ
လျော့နည်းသွား လိင်စိတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်
အစာခြေခြင်းနှင့်အတူ ပြနာ များ
မူမမှန်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း
နောက်ကျောတွင် တင်းမာမှု နှင့်နာကျင်မှု
Keto Guru မလိုအပ်သောခန္ဓာကိုယ်အဆီများကိုတဖြည်းဖြည်းဖယ်ရှားရုံသာမကဘဲကိန်းဂဏန်းများကိုပြုပြင်ပေးပြီးအဝလွန်မှုမှပြာများကိုရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးပြန်ကြောသွေးပြန်ကြောများ ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်ပွားခြင်းကို သင်လျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့အပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးသောအရာများကိုဖယ်ရှား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့်ဘဝကိုရွှင်လန်းစေပါ။
Keto Guru အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်သဘာဝအစိတျအပိုငျးမြားပါဝငျသ – အဆီ တွေက:
မဂ္ဂနီစီယမ်။ ဤဒြပ်စင်၏ချို့တဲ့မှုသည်ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုနှေးကွေးစေပြီးအိပ်စက်ခြင်းကိုနှောင့်ယှက်စေသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည်ဂလူးကို့စ်ပမာဏကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသည်၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ၎င်းသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသက်ရောက်မှုရှိသည်။
L- Glutamine။ ချိုမြိန်သောအစားအစာများကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသည်။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်သည်ကြွက်သားများတစ်သျှူးကိုအားဖြည့်ပေးသည်၊ သွေးဖွဲ့စည်းမှုကိုတိုးတက်စေသည်၊ အရည်များများဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုရပ်တန့်စေသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်၊ မည်သည့်စွမ်းအင်ဝန်များ၏ရလဒ်ကိုမဆိုတိုးပွားစေသည်၊ ခန္ဓာကိုယ်၏ကယ်ဆယ်ရေးကိုကောင်းမွန်စေသည်။
ပိုတက်စီယမ်။ ရေကိုဆဲလ်ထဲသို့ဆွဲယူပြီးအတွင်းပိုင်းဆဲလ်အရည်ပမာဏတိုးပွားစေသည့်အဖိုးတန်ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဖြစ်သောကြွက်သားမျှင်များအတွက် အထူး အရေးကြီးသည်။ ဤအာဟာရချို့တဲ့မှုကြောင့်အသားအရေလျော့ကျသွားသည်။ ကြွက်သားများကယိုယွင်းယိုယွင်းလာပြီးလှပသောအားကစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုဖန်တီးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
နီကာ။ ၎င်းသည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုစီးဆင်းမှုကိုတာဝန်ယူသည်၊ သွေးကြောနံရံများကိုအားဖြည့်ပေးသည်၊ အာရုံကြောစနစ်ကိုငြိမ်သက်စေသည်၊ ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်သည်။ ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချပြီးပြားဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဒါဟာ စနစ်နှင့်ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ပုံမှန်။ ၎င်းသည်သက်သတ်လွတ်စားသူများအတွက်အထူးအသုံးဝင်သည်၊ အသားဓာတ်ထုတ်ကုန်များတွင်ဗီတာမင်၏အများစုကိုတွေ့ရှိရသည်။
Pyridoxine။ ဗီတာမင် B6 သည်ပရိုတင်းများနှင့်အဆီများပျက်စီးခြင်း၊ အဖုဖယ်ရှားခြင်း၊ ကိုသန့်ရှင်းစေခြင်း၊ အူနှင့်အစာအိမ်မှအဆိပ်များကိုဖယ်ရှားသည်။
γ-Aminobutyric အက်ဆစ် (GABA)။ ဤပစ္စည်းသည်အာရုံကြောဆဲလ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့အချက်ပြခြင်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ အဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ စိုးရိမ်စိတ်ပျောက်သွားတယ်၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်အာရုံကြောစနစ်၏ခြုံငုံလုပ်ငန်းတိုးတက်လာသည်။ အစာစားချင်စိတ်လျော့နည်းလာပြီး တားမြစ်ထားသော ထုတ်ကုန်ကိုတမ်းတနေသည်။
Keto Guru တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအကောင်းဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်သည်၊ သို့သော် နှင့်အခြားမလိုလားအပ်သောတုံ့ပြန်မှုများမဖြစ်ပေါ်စေပါ။
Keto Guru အကောင်းဆုံးအားဖြင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချသောအစာနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ ဒါဟာဒီအစားအစာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ရလဒ်များကိုခိုင်မာအောင်ပါလိမ့်မယ်။ လျှောက်လွှာအစီအစဉ်:
တက်ဘလက်တစ်လုံးကိုဗိုက်အူပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နံနက်ယံ၌အစာမစားမှီမိနစ် ၃၀ ခန့်သောက်ပါ။ သန့်ရှင်းသောပူနွေးသောရေနှင့်အတူဖန်ခွက်ထဲမှာပျော်, နှိုးဆော်။
၁၄ ရက်ကြာသောက်ပါ၊ အများဆုံးတစ်လ၊ ဘိုဟိုက်ဒရိတ်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်သောက်သည့်အရည်ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ပါ။
Keto Guru – ကာဗွန်ဓာတ်နည်းသောအစားအစာကိုသင်လိုက်နာ။ ရလဒ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်လိုပါကကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမည့်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောလက်ထောက်။ ပုံမှန်အစားအစာတစ်ခု၏ရလဒ်သည်တစ်လလျှင်အများဆုံး ၇ ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ပြီး တက်ဘလက်များနှင့်အတူ ကိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှု မပါဘဲတူညီသောကာလအတွင်းပျမ်းမျှ 15-18 ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံး နိုင်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းသည်အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည် – အထိုင်များသည့်ဘဝပုံစံနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာအမှားများမှပြင်းထန်သောဟော်မုန်းပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်သောဆေးဝါးများသုံးစွဲခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ တင်းကြပ်သောအစားအစာများ၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများ၊ နေ့စဉ်လေ့ကျင့်မှုများနှင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုများကအမြဲတမ်းကောင်းမွန်သောရလဒ်ကိုမပေးချေ။ ကယ်ဆယ်ရေးသို့ရောက်လိမ့်မည် Keto Guru။ ဒီထူးခြားတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုသင့်တော်သောအာဟာရနှင့်ကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ဆိုင်သောကျွမ်းကျင်သူများကတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအစားအစာအတွင်းမှဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏကိုနာကျင်စွာကန့်သတ်ရန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုသက်ဝင်စေသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေနိုင်တယ်
အသုံးပြုမှု၏အင်္ဂါရပ်များ Keto Guru
အစားအစာကိုသိမ်းထားခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်ကန့်သတ်ရန်၊ အဆီများသောပရိုတိန်းများကိုမှီခိုရန်၊ ၎င်းသည်ဖယ်ရှားရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲရန်စီမံထားပြီးဖြစ်သောခန္ဓာကိုယ်သည်ယခင်အလေ့အထများကိုလုံလောက်စွာမတုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သငျသညျလေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်ကို။
အသည်းဆဲလ်များတက်ကြွစွာကွဲထွက်သွားသောကြောင့် ကိုယ်ထည်သည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှသာအစာအာဟာရကိုထုတ်လုပ်တော့မည်ကိုသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ရဲ့အရေအတွက်ကများသောအားဖြင့်အပိုကီလိုဂရမ်များစွာကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ အချိန်အတော်ကြာစွာပင်ဒြပ်ထုသည်အတူတူပင်ဖြစ်နေပုံရသည်။
ယူသောအခါ Keto Guru ထိုကဲ့သို့သောအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ရပ်များရှိပါတယ်။ ဒီကိရိယာကလူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုသက်ရောက်နိုင်တယ် –
အလွန် အလောင်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုအလွန်အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးနေ့၌ပြီးသား ပြည်နယ်စေပါတယ်;
ဆေးများကိုအဆက်မပြတ်သောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ တစ်လတွင် ၁၅ ကီလိုဂရမ်ခန့်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးအများစုအတွက်လုံလောက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ရှုပ်ထွေးသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပုံမှန်လည်ပတ်မှုသည်အချက်များစွာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အစားအစာတွင်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏများခြင်းကကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေသည်။ သကြားလုံးများကိုအခြားထုတ်ကုန်များ၏မျက်နှာသာပေးခြင်းဖြင့်စွန့်ပစ်ခြင်း၊ တက်ဘလက်များအထူးပြုလုပ်ထားသောဇီဝသက်ရှိဖြည့်စွက်ဆေး Keto Guru သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြန်ဆန်စေသည်။ ၎င်း၏အနာပျောက်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ
သူတို့ကဘိုဟိုက်ဒရိတ်စုပ်ယူမှုကိုပိတ်ဆို့ပြီးပိုသောကယ်လိုရီများကခါး၊ တင်ပါး၊ အစာအိမ်အဆီခြံများ၌အခြေချရန်ခွင့်မပြုပါ။
ကိုယ်အလေးချိန် ကျစေရန်အရေးကြီးသောဗီတာမင်များ ဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာ ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
သင်တွေ့သည့်အတိုင်းအစားအသောက်များတွင်ပါဝင်သောဆေးပြားများ Keto Guru သည်အပိုပမာဏများနှင့်ကီလိုဂရမ်များကိုပိုမိုသက်သာစေခြင်း၊
ဖြစ်စဉ်သည်အသည်းသည် များကိုထုတ်လုပ်ပြီး၎င်းကိုစွမ်းအင်၏အခြေခံအရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်အပြင်ဘက်မှကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များရောင်းချမှုကိုကန့်သတ်ထားစဉ်လောင်စာသိုက်များသည်လောင်စာအဖြစ်စတင်လုပ်ဆောင်သည်။ Keto Guru အ နိမ့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အချိန်တိုအတွင်းအလေးချိန်ကိုထိန်းညှိရန်ကူညီပေးသည်။
မိနစ် ၄၀ မှ ၅၀ အတွင်းသင် ကိုထည့်ပါ။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုလက္ခဏာများကိုပိတ်ဆို့စေပြီး၊ သူတို့က ၏လောင်ကျွမ်းခြင်းစဉ်အတွင်းဆင်းသက်လာ ဖြစ်ကြသည်။ ဇီဝြဖစ် 2-3 ကြိမ်အားဖြင့်အရှိန်သည်, ကယ်လိုရီများ၏အရေအတွက်ကန့်သတ်မရနိုငျသညျ, မှဆက်လက် သင်တန်းမတိုင်မီကဲ့သို့တူညီသောလမ်းကိုစားကြလော့။ သူတို့ကို တုံ့ပြန်မှုနဲ့အစားထိုးကတည်းကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမလိုအပ်ပါ။
အဆီလောင်ကျွမ်းစေသည့်အစိတ်အပိုင်းများအပြင်လူသားများတွင်အသုံးဝင်သောအခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ မှတ်ဥာဏ်၊ စိတ်စွမ်းရည်စသည်တို့သည်ဗီတာမင်များနှင့်ဒြပ်စင်များကောင်းစွာသိမှုစွမ်းရည်များကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ၎င်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါကလေ့ကျင့်မှု၏ရလဒ်ကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။
Keto Guru ကြွက်သားမျှင်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံထောက်ခံပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ပင်တန်ခိုးအားဝန်မပါဘဲ, သငျသညျကနေအရေပြားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ပြိုင်ကားဆန်သောနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ် ဆုံးရှုံးနေစဉ်အတွင်း ကီလိုဂရမ်။ တစ်လအတွင်းကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ပေါင်ကျခြင်း၊ လှပသော တစ်ခု၊ ပုံသဏ္fန်နှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောကိုယ်ခန္ဓာကိုရရှိလိမ့်မည်။
အကျိုးကျေးဇူးများ Keto Guru အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်
ပိုလျှံသောကိုယ်အလေးချိန်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ယနေ့အားကစားခန်းမသို့မဟုတ်ချွေးပေါင်းအိမ်များတွင်ချွေးထွက်ခြင်း၊ တင်းတင်းတင်းကြပ်သောအစာကိုစားခြင်း၊ အစားအသောက်ဆေးပြား Keto Guru မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲသဘာဝလမ်းအတွက်ခန္ဓာကိုယ်အဆီဖျက်ဆီးဖို့ကိုယျခန်ဓာကို ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။ ထုတ်ကုန်၏ထူးခြားသောဖော်မြူလာသည်ဟော်မုန်းများ၊ အန္တရာယ်ရှိသောဓာတုဗေဒ၊ အားပြင်းစေသောစိတ်ကြွဆေးများမပါ ၀ င်ပါ။ ၎င်းသည် ဆေးဆိုင်များတွင်ရောင်းချသောလူသိများသော များနှင့်မတူပါ။ ၎င်း သည် ကိုစတင်ခဲ့သည် ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သိုက်များတက်ကြွစွာပြုပြင်ခြင်းနှင့်အသုံးဝင်သောစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းစတင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပိုလျှံအလေးချိန်လျှင်မြန်စွာထွက်ခွာသည်။
ကိုယ်အလေးချိန် – အဆီလက်လှမ်းမီဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စျြလြူရှုမှု, အားနည်းခြင်း, မူးဝြေခင်း, ဖြစ်စေတဲ့မဟုတ်နေစဉ်, မည်သည့်အဆင့်တွင်အဝလွန်သူတို့နှင့်အတူလောင်ကျွမ်းတုပ်ကွေး;
“ခြောက်သွေ့ခြင်း” အတွက်သင့်လျော်သော – သွယ်လျသောပုံသဏ္thစ်ပေါ်ရန်လိုအပ်သောကြွက်သားထုထည်တိုးပွားနေစဉ်ကိုယ်အင်္ဂါများပတ် ၀ န်းကျင်အထူနှင့်အရေပြားအောက်လွှာလွှာများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
လုပ်ကွက်အစာစားချင်စိတ် – ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသကြားလုံးအဘို့မတရားသောဖယ်ရှားပေး, လျှော့ချရန်ကူညီပေးသည် သောအဘို့ကို, အရွယ်အစား ကယ်လိုရီစားသုံးမှု နှင့်နောက်ဆုံးတွင်လျော့နည်းစားသော်,
ကင်ဆာအန္တရာယ်လျှော့ချခြင်း – ပုံမှန်မဟုတ်သောဆဲလ်များသည်အဓိကအားဖြင့်ဂလူးကို့စ်ကိုစားသုံးသည်၊ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းသည်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည်။
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး – ထဲသို့ ၀ င်ရောက်မှုနှုန်းကို မိနစ် ၄၀ အထိအရှိန်မြှင့်ပေးပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ကာဗွန်နိမ့်ကျသောအစားအစာသည် ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အတွင်းသာဖြစ်သည်။
၎င်းထုတ်ကုန်ကိုအစားအစာနှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏနိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများ၊ အသားများဖြင့် ကိုကြွယ်ဝစေနိုင်သော်လည်းအချည်းနှီးသောကယ်လိုရီပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့အပြင်တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးတစ်လီတာလီတာပိုမိုအရည်များများစားပါ။
နှင့်ပတ်သက်သောထင်မြင်ချက် Keto Guru
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအများစု၏အိပ်မက်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အားကစားရုံ၌အားကစားရုံများတွင်နာရီပေါင်းများစွာတက်ကြွစွာလောင်ကျွမ်းခြင်းသို့မဟုတ်တင်းကြပ်သောအစားအစာများစားပြီးသည့်နောက်ဘာမျှမစားဘဲနေလေ့ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုနှစ်ခုစလုံးသည်အပိုပေါင်နှင့်စင်တီမီတာနှင့်ခဏတာခွဲခွာရန်ကူညီနိုင်ပြီးအဆိုးဆုံးမှာသူတို့သည်ကျန်းမာရေးာများနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ပိုမိုများပြားစေနိုင်သည်။
ယခင်ကဤအဘို့, ကအထူးအစာအာဟာရကိုလိုက်နာ အနာရောဂါငြိမ်းစရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကိုခံယူ ခြင်း နှင့်ရိုးရာ, အေးဂျင့်ကိုအသုံးပြုရန်အသည်း၏အခြေအနေတိုးတက်စေရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်လူတိုင်းအတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်တတ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းကိုသင်ကြိုးစားကြည့်နိုင်သည်။ Keto Guru ၎င်း၏အကူအညီဖြင့်အဓိကသန့်စင်သည့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏အကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုအထောက်အကူပြုပြီးဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုသက်ဝင်စေသည့်အရာဝတ္ထုများထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်သည်။
အစားအသောက်များတွင်ဆေးပြားအပေါ်လူနာတွေကိုအကြံပေး Keto Guru ဒီဓါတ်ဖြည့်စွက်အားဖြင့်အပိုကီလို၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီး, ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များ၏စုပ်ယူ, အစာစားချင်စိတ်များနှင့်တိုက်ပွဲတွေကွောထိန်းချုပ်ထားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဗီတာမင်နှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်ဖြန့်ဖြူး, ဒါပေမယ့်လည်းလုပ်ကွက်မသာလို့ပဲ။
ဖိုရမ် တွင်သင်သည်, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက် အတွက်ဒီ အကြောင်းကို မှတ်ချက် နှင့် ထင်မြင်ချက်များ ရှာတှေ့နိုငျ သောသူတို့အား Keto Guru ကိုသုံးပါတဲ့သူ။
Keto Guru ၎င်းသည်ခေတ်သစ်အော်ဂဲနစ်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပေါင်းစပ်မှုကိုအစပျိုးစေသည်။ အစားအစာကိုကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ အကြိမ်ပေါင်းများစွာအရှိန်မြှင့်တင်ပေးသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဤသည်သည် လူ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမလိုအပ်သည့် အစားအစာ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး လုံခြုံသောပုံစံဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဖော်မြူလာကိုအမေရိကန်နှင့်ဥရောပသိပ္ပံပညာရှင်များပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
ဒါဟာလုံးဝသဘာဝကဖွဲ့စည်းမှု, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်စွဲ ၏မရှိခြင်း အားဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ ၎င်းသည်အဝလွန်မှုအဆင့်အားလုံးအတွက်ထိရောက်ပြီး သိသာသောရလဒ်များကို လျင်မြန်စွာ ရရှိစေသည်။
အစားအသောက်ဆေးပြားများ ၀ ယ်ရန် Keto Guru ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မှာယူပါ။ လျှောက်လွှာတွင်သင့်ဖုန်းနံပါတ်နှင့်နာမည်နှစ်ခုသာဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုအော်ပရေတာကပေးပို့ပြီးလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်၎င်းတွင်ဖော်ပြထားသောနံပါတ်သို့ပြန်ခေါ်လိမ့်မည်။ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် မြန်မာ တွင် အမှာစာပေးပို့ပြီးနောက် သင်ကြိုတင်ငွေမတောင်းဘဲပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းရွေးချယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်း Keto Guru လျှော့ချပြီးသင် သိမ်းဆည်း နိုင်သည်။
Nehmen Sie noch heute mit Slim X Line Österreich ab – Preis, Testberichte, kaufen, was ist das
Keto Guru Saudi Arabia, price, comments, how to use – how to easily lose 26 extra kilos at home